Njalo usomabhizinisi abanquma bahlanganyele ukuhweba ngokuyinhloko cabanga umbuzo kanjani ukuthengisa umkhiqizo. Kuyaphawuleka ukuthi kuleli cala ufeza ababalulekile ukunxenxa. Ngemva bonke abathengisi ukuthintana ngqo neqembu umthengi, futhi kuncike bomsebenzi wabo inzuzo yebhizinisi lakho.
Ukuze ukwazi ukuthi udayise umkhiqizo othile, kufanele ukhumbule izinyathelo eziyisisekelo inqubo. Ngakho, umdayisi afanelekayo kumelwe mathupha bayakhonza zonke isivakashi ukuba esitolo amnike konke usizo kungenzeka endabeni yokukhetha umkhiqizo othize. Lena akuyona ukuba awayiphazamisi, noma ikhasimende ungavele uzihambele, akakwazanga ukumelana ukunakekelwa obunobudlova obufana. Isinyathelo ekahle umdayisi ngeke lokubingelela ikhasimende futhi sinikela kuye njengesipho amasevisi abo, kufanele wasondela ohlangothini lwesobunxele ukuze isivakashi umbono wokuthi ulinakile kuwe. Umdayisi Kuncono njalo ugxila kumuntu, hhayi inkampani noma esitolo. Ngokwesibonelo, esikhundleni le nkulumo kanje: "In esitolo sethu ungathola umkhiqizo ukuze ivumelane zonke ukunambitheka", kufanele sithi: "Uhlangene ngani wena uthanda? I ingakusiza? ".
A umuntu owayeyisazi kanjani ukuthengisa kahle, uyaqonda ngokucacile ukuthi le nkinga kubalulekile yonke imininingwane, kusukela zangaphandle nephimbo lakho. Ukuxhumana iqembu amaklayenti kudingeka ngobumnene, ezinokuthambekela friendly, kodwa elikhulu ngokwanele ukuze izivakashi akudingeki ukuba nzima izindlebe zakho. Umhlangano no-umthengi okungahle kwenzeke, kufanele isizathu sokujabula ke ukumamatheka ngobuqotho ngeke ukuheha izivakashi ezingaphezu.
Isici esibaluleke kakhulu kule nqubo ye ukugcwaliseka umkhiqizo othile isethulo yayo, okungukuthi, umfanekiso wanoma izithakazelo uhla yayo ezingeni elifanele. Ngokwesibonelo, kungase kudingeke uqonde indlela ukuthengisa izembatho. Ukuze kwenziwe ngcono ikhwalithi yokuthengisa, udinga ukubeka ngokwengqondo ngokwakho endaweni yomthengi futhi sicabange ngalokho ongathanda ukuphathwa ngayo, futhi babefuna ukuzwa. Umdayisi kufanele akutshele mayelana izinzuzo umkhiqizo kanye nenzuzo yayo womuntu ngamunye. Injongo eyinhloko ukuthi iklayenti wazizwa kanjani le nto ayidingayo manje.
Yinye indlela ephumelela umkhuba yokuthengisa abanolwazi, ngokuthi "amanani Fork." Le nqubo ibizwa esekelwe Luhlatiyo. Ngokwesibonelo, iklayenti abanesifiso into ethile, kodwa wangabaza isidingo yokufuna yayo. Khona-ke umthengisi libonisa-product efanayo nalena, ukubaluleka okuyinto siphezulu noma kwenza isaphulelo phezu kwento ekhethiwe. Kufanele kube ngokomzwelo ukuchazela iklayenti kungani wawa njengoba ithuba eliyingqayizivele. Futhi njengoba 'ukulawula esingu "bungasicindezela umqondo yobugovu ukuze sicacise ukuthi emsebenzini ohlongozwayo namuhla ezivumelekile, kusasa kuyinto" freebies "ngeke.
Kuleli zwe lanamuhla ukuthengiswa okwandile ngokuxhumana kusho. Le ndlela ubhekwa ngokwanele inzuzo, Nokho, kubalulekile ukuba baqonde indlela ukuthengisa ngocingo. Phela, kukhona ubuhlakani ekhethekile endaweni ukuthengiswa kwempahla. Ngenxa iklayenti akaboni umdayisi, ukuzwa kuphela izwi lakhe, ukubaluleka esiphawulekayo asinikeza ithoni, amabinzana, ngendlela abakhuluma ngayo. Lapho kukhona ukuba contact ngamazwi kuphela, kunzima kakhulu ukukholisa abathengi isidingo umkhiqizo futhi izinga layo. Ungenza emthambekeni ezingeni intengo kule indlela yentengiso, ngokuvamile izindleko ngezimpahla ezinjalo esitolo ephansi kakhulu. Lokhu kalula wachaza iqiniso lokuthi asikho isidingo ukuqasha isakhiwo.
Ngakho, ukuze uthole ukuhweba elichumayo zidinga wakufanelekela abasebenzi ukuba baqonde ngokucacile ukuthi ungawukhipha kanjani udayise umkhiqizo othile. Umdayisi Good ngaso sonke isikhathi sihloniphe izithakazelo iqembu umthengi, umsebenzi wakhe kuphela emikhulu ukuqaliswa, kodwa futhi ukudala izimo ukhululekile kakhulu iklayenti ngamunye.
Iyini imfihlo olusemthethweni
Yiziphi Thenga Tyres: iphrofayela okuphansi noma High-sephrofayela?
Kuphi ukugubha uNyaka Omusha Minsk?